Nkowa nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ nweta ike na iru nke organic elekọta mmadụ media ahịa, ọ ka bụ netwọkụ siri ike ịchọpụta n’ime enweghị nkwalite. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ahịa nke na-adịghị adị afọ iri gara aga, mana atụpụtara ka ha nweta ijeri $ 11 na ego site na 2017. Nke a sitere na $ 6.1 ijeri na 2013.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-enye ohere iji wuo mmata, ebumnuche dabere na data ala, omume igwe mmadụ na omume. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime mgbasa ozi nwere ike tinye ya n'akụkụ n'akụkụ isiokwu ndị dị mkpa. Ọtụtụ nyiwe na-enyekwa ohere ịmegharị ohere maka ndị ọbịa ndị hapụrụ saịtị gị ma ọ bụ ụgbọ ahịa gị wee laghachi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Adịghị m mgbe niile a onye mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ezie. Oge m na-agbasa mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ebumnuche nke onye ọrụ na-elekọta mmadụ. Ọ bụrụ na ha nọ na otu ndị na-elekọta mmadụ ebe mmasị dị na mgbasa ozi ahụ, ọ nwere ike rụpụta ezigbo nsonaazụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ebumnuche nke onye ọrụ ahụ bụ ịga leta ezinụlọ ha na ndị enyi ha ma ị na-echekwa mgbasa ozi ndị na-adịghị mkpa n'etiti… nwere ike ị gaghị enweta nsonaazụ ịchọrọ ịkwado mkpọsa na-aga n'ihu.
Unified mere ihe omuma ihe omuma a iji gosiputa oganihu nke nyiwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Ejikọtara ọnụ bụ ngwụcha njedebe na njedebe maka nghọta sitere na data, ezigbo njikarịcha mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana mgbasa ozi mmemme na isi netwọkụ mmekọrịta ọhaneze na otu ikpo okwu.
Tags: emarketerFacebookfacebook ad revenuefacebook mgbasa ozi apifacebook mobile mgbasa ozifacebook nkwado akụkọakụkụ anọLinkedInenweta egolinkedin mgbasa ozi apiego mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi na-elekọta mmadụmmefu mgbasa ozi ọha na ezesụọ ngọngọtumblrTwitterNweta ego mgbasa ozi twittermgbasa ozi twitter apitwitter mgbasa ozi api mmekọNweta ego mgbasa ozi twitteryahooyoutube